“छबि र रेखा अनि शिल्पाबीच बिवाह भएकै छैन के डिभोर्स” : अधिबक्ता स्वागत नेपाल « Janaboli
“छबि र रेखा अनि शिल्पाबीच बिवाह भएकै छैन के डिभोर्स” : अधिबक्ता स्वागत नेपाल
काठमाडौ । नायिका शिल्पा पोखरेल र छबि राज ओझाबीच कानूनी रुपमा बिबाह नै नभएको तर्क आउँन थालेको छ । चर्चित अधिबक्ता स्वागत नेपाल ( भद्रप्रसाद नेपाल) ले उनीहरुबीच कानूनी रुपमा बिबाह नै नभएको दावी गरेका छन् । आजमात्र छबिकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले छबिले बहुबिवाह गरेको भन्दै श्रीमान र शिल्पा दुबैलाई कारवाही गरि पाउँ भन्दै उजुरी दिएकी हुन् ।
हेमाले अधिकवत्ता स्वागत नेपाललाई साथ लिएर महानगरिय प्रहरी वृत्त गौशलामा बहुविवाहको उजुरी दर्ता गरेकी हुन् । हेमाले छबि र शिल्पाबिरुद्ध उजुरी दिएपछि कतिपयले यसलाई शिल्पालाई फसाउँने सुनियोजित षडयन्त्रको रुपमा पनि लिईरहेका छन् । किनकी बाहिर चर्चामा आए अनुसार शिल्पाले सम्पत्ति दाबीसहित डिभोर्स फाईल गरेकीछिन् ।
छबि पक्षले भने सम्पत्ति जोगाउँन यो सबै षडयन्त्र गरेको टिकाटिप्पणी भईरहेको छ । किनकी हेमाले यसअघि छबिको दोस्रो श्रीमती गितान्जली सुनुवार , तेस्रो श्रीमती रेखाबिरुद्ध चाही किन उजुरी दिईनन् ? यही प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । हुन पनि हो श्रीमानले यतिका बिवाह गर्दा हेमा किन चुप बसिन् ? र शिल्पाले सम्पत्तिसहित डिभोर्स फाईल गर्दा चाही बहुबिवाहको उजुरी दिनुले यही संकेत गरेको टिप्पणी भईरहेको छ । यता हेमाका वकिल स्वागत नेपालले भने रेखा र छबिबीच कानुनीरुपमा बिवाह नै नभएको समेत दाबी गरेका छन् ।
केही दिन अघि एक च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा रेखाले छबिसंग अदालतमा डिभोर्स गर्दा रेखाले छबिको सम्पत्ति नै नलिएको बताएका थिए । फेरी उनैले छबि र रेखाबीच कानुनीरुपमा बिवाह नभएको र बिवाह दर्ता नै नभएको समेत खुलासा गरेका छन् । उनले छबि र रेखाको बिवाह दर्ता नभए तर छुट्टिदा भबिष्यमा कुनै समस्या नहोस भनेर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर छुट्टिएको बताए ।
यसरी हेर्दा वकिलकै अभिव्यक्ति बाँझिएको छ । जसमा षडयन्त्रको गन्ध आएको कतिपयको बुझाई छ । तर अहिलेका चर्चित अधिबक्ता स्वागत नेपाल भन्छन् मेरो कानून विद्याले कागज हेर्ने हो काज हेर्दा छवी एउटै मात्र बिबाह गरेका पुरुष हुन् अर्को श्रीमती छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै बिबाह गरेको हो भने उक्त युवती र बिबाह गर्ने छबिलाई कार्बाही हुनुपर्छ । उनले थपे हाम्रो माग यही हो ।